Ny charger an'ny Apple Watch Sport dia tsy metaly | Avy amin'ny mac aho
Ny charger an'ny Apple Watch Sport dia tsy metaly toa ny an'ny modely lafo kokoa
Roa andro aorian'ny Apple Watch ary aorian'ny fahitana horonan-tsary sy sary an-jatony amin'ireo fiambenana Apple vaovao ity dia hanondro antsipiriany izahay izay mpampiasa maro no tsy afa-po tanteraka.
Io ilay tariby mpampandeha izay miaraka amin'ny Apple Watch Sport. Hatramin'ny nanolorana azy dia ny tariby izay naseho tamin'ny horonantsarin'ny orinasa paoma dia tariby izay niafara tamin'ny karazana takelaka boribory VY. Na izany aza, amin'ny maodely Sport, tsy izany no izy ary nahatsapa ireo mpampiasa fa kilasy faharoa ny Apple Watch.
Amin'ny fahatongavan'ny Apple Watch eny amin'ny arabe dia misy fiovana maromaro amin'ny resaka kojakoja izay entin'ny maodely sasany ary ny hafa ho fanampin'ny fonosana izay anehoana azy ireo. Efa tamin'ny fotoana nampahafantarinay anao fa ny Apple Watch Edition dia homena boaty miendrika kioba, izay misy boaty plastika milahatra tsara ao anatiny miaraka amina lamba, mifanandrify amin'ny tadin'ny Apple Watch hiarovana azy bebe kokoa.
Ankehitriny, ny zoma lasa teo dia maro ireo mpampiasa no gaga nahita fa tsy io ihany no mahasamihafa ny maodely Apple Watch. Ny Apple Watch Sport dia nofonosina anaty boaty mahitsizoro elongated ary habe tsy mahazatra ho an'ny vokatra Apple. Ary koa, ny charger izay miaraka amin'ity maodely Apple Watch ity vita amin'ny plastika tanteraka izy io fa tsy vy toy ny nampiroborobo an'i Apple hatramin'ny voalohany.
Ny charger misy ny tendron'ny vy, ary noho izany misy kalitao avo kokoa, dia misy fenitra miaraka amin'ny Apple Watch sy Apple Watch Edition. Ho fanampin'izay, ireo maodely roa ireo dia aseho amin'ny karazana boaty toradroa hafa ary misy famaranana tsara kokoa. Noho izany rehetra izany, ireo mpampiasa izay nividy ny Apple Watch Sport dia mahatsapa fa efa nandoa vola tamin'ny Apple Watch izy ireo, na dia ny famantaranandro dia manome ny fampanantenany, ny fonosana sy ny kojakoja azy dia kilasy faharoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny charger an'ny Apple Watch Sport dia tsy metaly toa ny an'ny modely lafo kokoa
Fantatrao ve ireo boky fampianarana Apple Watch?
Apple Watch, ny lehibe sa ny kely?